MBA GANA EBURULA BATA: NAIJIRIA GA-ALARỊRỊ – hoo!haa!!
Ụmụ Naijiria bi n’akụkụ Ashanti nke mba Gana, ma na-azụ ahịa n’ebe akpọrọ ‘Suame Magazine Market’ na Kumasị, chịzịkwa uche n’aka maka na ndi Gana na-ebuso ha agha ugbu a. Ka ihe sị gbata kwụrụ n’ebe ahụ kịta, ndi Gana añụọla ya dịka iyi were kwue na ndi ọbịa ha ga-alarịrị.
Ndi ndu ụmụ Naijiria bi n’ebe ahụ ekwuela na ha anaghịzị ekumi ụra ekumi n’ihi na ụmụ Gana tadoro ha anya were ekwu na ndi ọbịa bi na be ha ga-ala.
Ha sịrị na ndi otu azụm ahịa nke mba ahụ nakwa ndi ahịa ndi ọzọ na-aba n’ime ụlọ ahịa ụmụ Naijiria dị n’ahịa ha, na-akpụpụta ndi Naijiria n’ụlọ ahịa ha.
Mgbe ọ na-agwa ndi nta akụkọ okwu, otu onye n’ ime ndi ndu ndi ahia Naijiria n’ebe ahụ bụ Viktọ Mụọneme kwuru na Gana gaa n’ihu n’ụda akparama agwa a, na ha ga-amalite imegwara ha.
Mụọneme kwuru na ndi isi ndi uwe ojii nke Ashanti ezitela ndi ọrụ ha n’ahịa ahụ maka ikwụsịṅ nsogbu a, mana ọ sịrị na ihe na-ebe ka na-ebekwa.
Onye isi ndi uwe ojii Ashanti kwuru na onye nnọchite anya Naijiria na mba Gana akpọtụrụla ya maka ọgbaghara ahụ.
Okwuru na ya ezigala ndi ọrụ uwe ojii n’ebe ahụ.
N’agbanyeghị nke a, ụmụ Naijiria nọ n’ebe ahụ kwuru na ndi otu azụm ahịa ndi Gana n’ebe ahụ ekweghị ha ñụrụ mmiri tọgbọ iko n’ihi na ha na-amabata n’ime ụlọ ahịa ha ma na-emebiri ha ngwa ahịa mgbe ọbụla ha jiri meghee ọnụ ụzọ ụlọ ahịa ha.
Mọụneme sịrị na nke a mere na ha kpọchisiri ụlọ ahịa ha ugbu a ma na-anọkwa nkịtị, ma ha, ma ụmụ aka ahịa ha.
Gọọmenti mba Gana enyebuolarị iwu ka ndi mbia mbia niile nọ n’obodo ahụ atụ mgbere ụmụ opekata mpe ngwa ahịa laa n’obodo ha n’abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa asaa n’afọ a, maọbụ ha chere were anya ha hụ ihe okụ ji ntị oke eme.
Mịnịsrị na-ahụ maka azụm aha mba ahụ kwuburu na ha ga-amalita ikpụga ndi mbịa mbịa na-azụ ahịa opekata mpe na mba ahụ ụlọ ikpe ma ha kpụọ ekwo nkụ n’iwu a. Mana ha mechara lagodu azụ na nke a n’ihi na ha sịrị na-ekwesịrị inye ezigbo oge maka ime ka ozi ha baa onye ọbụla ntị nke ọma.
Previous Post: NDI OJI EGBE EJE EDULALA OTU ONYE ISI PASTỌ MỤỌ
Next Post: AKA AKPARALA ONYE OHI BỊARA N’ỤDỊ ỤKỌCHUKWU